Weerarkii Xabsiga Dhexe: Maxaa suurtageliyey hubka la dusiyey?
MUQDISHO, Soomaaliya – Iyaddoo dalka ku jiro qalalaase siyaasadeed iyo mid dastuuri oo la xiriira doorashada soo aadan, xaalada ammaanka ayaa sii xumaaneysa, waxaana maalmihii u dambeeyay dhacay weeraro.
Mid kamid ah weeraradaas oo noociisa oo kale dhif ay ka tahay dalka ayaa ka dhex-dhacay Xabsiga Dhexe ee Muqdisho markii maxaabiis loo dusiyey hub isugu jira dhowr xabo oo ah bastoolado iyo bam-gacmeedyo.
Dowladda ayaa xaqiijisay geerida 15 maxbuus, iyo dhaawaca 19 kale; illo amni waxay qireen in marxuumiinta isugu jiraan dagaalameyaal loo xukumay Al-Shabaabnimo iyo Daashnimo, iyo maxbuus kale oo rayid ahaa.
Guddiga ka kooban lix xubnood isuguna jira wasiir, taliyeyaal iyo xeer-ilaaliyeyaal ayaa baaraya si ay uga jawaabaan su'aalaha ku xeeran dhacdada.
Khuburada amniga ayaa rumeysan in la fududeeyay weerarka. Qaarkood waxay eeda fududeynta u saariyeen hay'adda sirdoonka qaranka "si ay u fakiso maxaabiis"; Inta la og-yahay hal maxbuus ayaa ku baxsaday falka.
Xuseen Sheekh Cali, agaasimaha machadka daraasaadka amniga ahna lataliyihii hore ee qaranka arrimaha amniga, ayaa rumeysan in falkaan uu caddeyn u yahay habacsanaan ka jirta jeelka dhexe.
"Weerarkan ma ahan midkii ugu horeeyay; horey waxaa u dhacay isku dayo ay kamid yihiin ciidamo qori lagula dhegay, balse arrintaan oo in la fududeeyay aysan ka marneyn waxay muujineysaa habacsanaan xoog leh oo ka jirta Xabsiga Dhexe," ayuu u sheegay laanta Af Soomaaliga ee Idaacadda VOA-da.
Taliyihii hore ee NISA, C/raxmaan Maxamed Tuuryare oo xusay in uu si shaqsi ah "u xaqiijiyey" in hub la dusiyey, ayaa aaminsan in ay suurtagelisay ciidanka ilaalada ka haya jeelka oo aan waaya-aragnimo u lahayn argagixisada.
"Meeshaas [saldhiga] kuma filna ciidan Asluub ah oo loosoo tababaray ilaalinta dad mukhaadaraad loosoo xiray; qeybaha kale ee amniga waa in ay ku yeeshaan dad uga soo warama oo waardiyaha qeyb ka haaya; waliba Shabaabka halista badan dadkii soo qabtay ee xogtooda haya waa in loo bedelaa iyagaba Asluub halaga dhigee," ayuu u sheegay Raadiyaha maxaliga ah ee KKN.
Qeybta kamid ah xabsiga ee weerarka uu ku dhacay ayaa lagu xiraa shaqsiyaadka lagu xukumay xukunada mudada dheer; waxaana caddeyn u ah in maxaabiista dhimatay 9 kamid ah ay ku xukumanaayeen xabsi daa'in.
Jeelka ugu weyn caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo ammaankiisa aad loo adkeeyo ayaa ku yaala degmadda Xamar-wayne, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in kadib dhacdadii u dambeysay laga bedelay ciidanka.
Haweenaydan isku sheegtay "Maamada" fanaankan qiraalka sameeyay ayaa baaq u dirtay madaxda sare ee Soomaaliya.